SRK Ayaa Saaxiibkiis Aamir U Qabtay Hawl Laga Rabay Kadib Markii Hargabka Shimbiraha Aamir Ku Dhacay | Filimside –
SRK Ayaa Saaxiibkiis Aamir U Qabtay Hawl Laga Rabay Kadib Markii Hargabka Shimbiraha Aamir Ku Dhacay
Aamir Khan iyo xaaskiisa Kiran Rao waxaa ku dhacay hargabka shimbiraha sidoo kalena waxaa lagu amray mudo todobaad ah inaysan guriga ka bixin si Virus-ka aysan u faafin iyagana looga daaweeyo.
Hadaba Aamir oo laga rabay inuu soo xaadiro bandhigii Satyamev Jayate Water Cup magaalada Pune ka dhacay ayaa imaan waayay asiga iyo xaaskiisa.
Aamir wuxuu taleefoon kula hadlay saaxiibkiis Shah Rukh Khan oo uu ka codsaday inuu booskiisa buuxiyo kana qayb qaato bandhigaan Satyamev Jayate Water Cup dadka biyo nadiif ah loogu sameenayo.
Bandhiga Satyamev Jayate Water Cup si qurux badan ayaa loo qabtay waxaana xariiriye ka ahayd gabadha TV-yada dadka ku wareesato ee caanka ah Anupama Chopra sidoo kalena Smriti Kiran waxay buuxisay booskii Kiran Rao laga rabay.
Anupama Chopra ayaa barteeda qoraalkaan soo dhigtay “Wax weyn ayaan ka faa’iidey la shaqeynta SRK, maanta waxay ahayd maalinta saaxiibtinimada sidaa darteed Aamir Khan shaqadiisa waxaa u qabtay saaxiibkiis SRK”
Bandhiga Satyamev Jayate Water Cup martida kale ee kasoo qayb gashay waxaa ka mid ahaayeen wasiir Devendra Fadnavis, ita Ambani, Siddharth Roy Kapur, Ashutosh Gowariker, Rakeysh Omprakash Mehra, Ram Madhvani, Nagraj Man Jule iyo kuwo kale.
Waxaa Aqriyay: 2,647